Zavatra tokony hodinihina rehefa manomboka fantsona YouTube ho an'ny fanombohana anao - YTpals
Zavatra tokony hodinihina rehefa manomboka fantsona YouTube ho an'ny fanombohana anao
Fantatra fa ny YouTube dia iray amin'ireo sehatra be mpampiasa indrindra amin'ny fandefasana horonan-tsary. Nitombo haingana ny sehatra tao anatin'ny taona vitsivitsy. Raha tamin'ny taona 2017, YouTube dia nanana mpampiasa mavitrika 1.86 lavitrisa eran-tany, nihoatra io isa io 2.3 miliara amin'ny taona 2020. Ireo antontan'isa ireo dia manondro fa ny YouTube dia manolotra sehatra mahasoa ho an'ny orinasa vaovao hanombohana ny fitomboany. Ny fahafahana omen'ny YouTube ho an'ny fanombohana dia maro. Azonao atao ny mametraka dokam-barotra mba hisarihana ny mpanjifa na hamorona fampianarana sy horonan-tsary momba ny vokatrao na serivisinao. Azonao atao ihany koa ny mampiasa YouTube mba hanomezana ny mpijery mijery ambadiky ny sehatra ny orinasanao.
Raha mieritreritra ny hanomboka fantsona YouTube ho an'ny orinasanao ianao dia tonga amin'ny toerana mety. Ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fototry ny fanombohana fantsona YouTube. Aorian'izay dia hanome anao torohevitra momba ny fampiasana YouTube izahay hanampy amin'ny fitomboan'ny orinasanao.
Ahoana ny fomba hamoronana fantsona YouTube ho an'ny fanombohana
Ity manaraka ity dia torolalana amin'ny dingana amin'ny famoronana fantsona YouTube ho an'ny orinasanao -
dingana 1: Midira ao amin'ny YouTube mampiasa kaonty Google efa misy an'ny orinasanao na mamorona kaonty vaovao. Ity kaonty ity dia tokony natokana manokana ho an'ny orinasanao.
dingana 2: Avy amin'ny pejy fandraisana ao amin'ny YouTube, azonao atao ny mametraka ny anaran'ny fantsona YouTube fanombohana anao.
dingana 3: Azonao atao ny mameno ny antsipiriany fanampiny momba ny kaontin'ny orinasanao.
dingana 4: Mamorona kisary fantsona ary ampidiro ny sangan-kanto izay maneho tsara ny orinasanao.
dingana 5: Fenoy ny famaritana ny fantsona YouTube anao.
dingana 6: Amboary ny hetsika sy ny fantsona nasongadina.
dingana 7: Mampiakatra votoaty.
Na dia fomba tsotra 7 dingana aza ny famoronana fantsona YouTube ho an'ny orinasanao, dia misy zavatra tokony hodinihinao rehefa mamorona fantsona YouTube anao.
1. Farito ny tanjonao amin'ny YouTube
Amin'ny maha fanombohana anao, ny fantsona YouTube hafa noho ny fantsona YouTube hafa. Tena ilaina ny mamaritra ny tanjon'ny fantsona YouTube hatrany am-boalohany. Raha ny tokony ho izy, ny tanjona dia tokony hahazo fitarihana bebe kokoa ho an'ny orinasanao ary hanova ny fitarihana hahazoana fidiram-bola bebe kokoa. Azonao atao ny mikolokolo ireo fitarihana azo avy amin'ny YouTube hanampiana ny lisitry ny mailakao. Ity lisitra mailaka ity dia afaka mandefa fifanarahana, manorina fifandraisana, ary mizara vaovao mifandraika amin'ny indostria.
2. Mamorona teti-bola ho an'ny fantsona YouTube-nao
Rehefa avy namaritra ny tanjonao ianao dia zava-dehibe ny mamorona teti-bola ho an'ny fantsona. Izany dia mila mandrakotra ny fitaovana hampiasainao hamoronana ireo horonan-tsary ary raha mila fanampiana ianao amin'ny fampandehanana ny fantsona. Ny teti-bolanao dia hofaritana amin'ny karazana sy ny kalitaon'ny atiny tianao hovokarina. Raha mila horonan-tsary avo lenta misy sanda famokarana lehibe ianao, dia hitombo ho azy ny tetibola ho an'ny fantsona YouTube-nao. Izany dia satria tsy maintsy manokana ny ampahany amin'ny teti-bolanao ho an'ny ekipan'ny mpaka sary sy ny tonian-dahatsoratra hokaramainao ianao, ankoatra ny fitaovana vidianao.
3. Mamorona horonan-tsary maromaro
Mba hihazonana ny tsy fitoviana amin'ny fantsona YouTube-nao vaovao dia tsara ny manao drafitra mialoha. Alohan'ny handefasanao ny horonan-tsarinao voalohany amin'ny fantsona, dia tsara ny manana horonan-tsary sivy hafa voaomana. Rehefa manomana ny atiny amin'ny andiany 10 ianao, dia ahafahanao miasa amin'ny fomba mahomby kokoa ary manome fotoana anao hifantoka amin'ny lafiny hafa. Rehefa miasa amin'ny horonan-tsarinao amin'ny andiany ianao dia hahatonga ny dianao YouTube ho toa tsy dia sahirana loatra.
Ny famoronana fantsona YouTube vaovao ho an'ny orinasanao dia mety ho toa sarotra amin'ny voalohany, fa ny ezaka tsy tapaka dia azo antoka fa hitondra vokatra. Matetika no sarotra ho an'ny fantsona vaovao ny fahazoana ny fandraisana anjara ilaina amin'ny mpijery. Mba hisarika ny sain'ny mpijery tsara kokoa dia ilaina ny manatsara ny metrikan'ny fantsonao. Eto no tian'ireo mpanome tolotra azo itokisana YTpals afaka manampy anao. Manana serivisy YouTube premium izahay izay afaka manampy amin'ny fampitomboana ny fantsonao. Ianao dia afaka mividy ora fijerevana YouTube, fijery, tia, ary na dia ny mpanjifa avy amin'ny YT Pals, izay manampy amin'ny fampandehanana ny algorithm YouTube ho anao. YTpals dia manome antoka fiarovana 100% amin'ny serivisy rehetra. Ny serivisy matetika dia manomboka ao anatin'ny 24 ka hatramin'ny 72 ora aorian'ny fametrahana ny baiko. Raha manana fanontaniana momba ny serivisy ianao dia afaka mifandray amin'ny serivisy mpanjifanay anio!
Zavatra tokony hodinihina rehefa manomboka fantsona YouTube ho an'ny fanombohana anao avy amin'i YTpals Writers, 27 Desambra 2021
Fomba 3 hananganana ny lisitry ny mpanjifa ao amin'ny Channel YouTube - Ny toro-làlanay
Amin'ireo mpampiasa isan-karazany afaka mahita ny fantsonao dia ireo mpamandrika izay anananao no ampahany manandanja indrindra amin'ny YouTube izay mandray anjara betsaka amin'ny atiny. Tsotra toy izao…
YouTube dia manana fiasa marobe izay azon'ny mpamorona horonan-tsary ampiasaina hanampiana azy ireo amin'ny asany sy ny tetikasan-dahatsary. Ny sasany amin'ireo fiasa ireo dia natao hanampiana anao hanintona fomba fijery misimisy kokoa raha mamela anao…
Ahoana ny fomba hampiroboroboana ny bilaoginao momba ny sakafo ao amin'ny YouTube?
Izao no fotoana mety indrindra hampiantsoana ny fahazaran'ny mpanjifa kendrenao mijery, satria io no fotoana iarahanay mandany horonantsary amin'ny Internet. Nahasarika marika maro ny fitomboan'ny atiny video…